आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नुहोस् : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नुहोस्
[0] July 4, 2016	| Sarju Rijal
सोमवार, जुलाई ४, असार २०
‘तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैंलाई जस्तै प्रेम गर्नू।’ —मत्ती २२:३९
मित्रताको सुन्दर कला नामक पुस्तकमा टेड इङ्स्ट्रमले अरूहरूलाई प्रेम गर्ने दशओटा तरिका वर्णन गरेका छन्ः
१) प्रेम निःशर्त हुन्छ। यदि यो निःशर्त छैन भने…यो मोलतोल हो।
२) स्वाभाविक रूपमा हामी आत्म–केन्द्रित हुन्छौँ (जुन स्वस्थ आत्म–सम्माानसँग सम्बन्धित छैन)। त्यसैकारण त प्रेम गर्न सचेत प्रयत्नको आवश्यकता पर्छ।
३) हामी प्रत्येक अद्वितीय सृष्टि हौँ। यसकारण एक–अर्कालाई बुझ्न प्रायः लामो समय लाग्छ।
४) के तपाईं मानिसहरूले के भनिरहेका छन् भन्ने कुरा सुन्न र बुझ्न वास्तवमै प्रयत्न गर्नुहुन्छ ? अथवा तपाईं जवाफ दिनको लागि मात्रै सुन्ने गर्नुहुन्छ; अर्थात्, अर्को व्यक्तिले बोलिरहँदा आफूले चाहिँ मनमनै जवाफ तयार पार्नुहुन्छ ? प्रेम गर्ने व्यक्तिले बुद्धिमानीपूर्वक सुन्छ।
५) के गर्नुपर्ने हो थाहा भए वा नभए तापनि कसैलाई साथ दिएर। आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु भनेको दृश्य रूपमा खीष्टको यो प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नु हो, ‘म तिमीहरूलाई कहिल्यै छोड्ने वा त्याग्ने छैनँ’ (हिब्रू १३:५)।
६) परमेश्वरले तपाईंलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनुभएको छ भन्दैमा उहाँले तपाईंलाई अरूहरूभन्दा ‘उच्च’ बनाउनुभएको छ भन्ने हुँदैन। पावलले अगुवालाई ‘आफूलाई जस्तो सम्झनु पर्छ, त्यसभन्दा बढ़ी नसम्झोस्’ (रोमी १२:३) भन्ने चेताउनी दिएका छन्
७) खुलेर प्रशंसा र प्रोत्सान दिनुहोस्। प्रेरणादायी वचनले अरूहरूको आत्म–सम्मान निर्माण गर्छ भने नकारात्मक टिप्पणीले उत्साह र प्रेमलाई नष्ट गर्छ।
८) आफ्ना मित्रहरूलाई पहिलो स्थान दिनुहोस्ः ‘आफूलाई भन्दा बढ़ी अरूलाई आदर गर’ (रोमी १२:१०)। यो अर्को बिन्दु हो जहाँ हामीले एक प्रेमिलो अगुवा र शक्ति हत्याउने व्यक्ति बिचमा स्पष्ट भिन्नता देख्न सक्छौँ जो ‘पहिलो स्थान’ चाहन्छ।
९) आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो छिमेकीलाई आफैंलाई झै प्रेम गर्नुहोस्। १०) अरू मानिसहरूका सबल पक्ष र सदगुणहरूमा जोड दिनुहोस्, तिनीहरूका पाप र कमजोरीहरूमा होइन। किन ? किनकि तपाईं आफैंलाई पनि छिट्टै अनुग्रह र प्रेमको खाँचो पर्नेछ !
आत्मिक भोजनः १ शमूएल १८:१–२०:२९, मत्ती २४:२६–३५, भजन १०२: १८–२८, हितोपदेश १७: ११–१४
« आफूलाई प्रेम गर्नुहोस्
VOF newsletter-62 »